Miyaan xaq u leeyahay inaan u beddelo shaqo ka fadhiisinta muhaajiriinta oo loo beddelo shaqo ka fadhiisin edbin ah?
Posted by Tranquillus | Apr 15, 2021 | Shabakada
Shaqo ka joojinta: qeexitaan
Waxaa jira laba nooc oo shaqo ka joojinta:
shaqo ka joojinta edbinta; shaqa ka joojinta shaqaalaha.
Shaqada ka joojinta edbintu waa ganaax edbin. Heshiiska shaqada waa la joojinayaa dhowr maalmood. Shaqaaluhu ma yimaado shaqada mana la siiyo wax mushahar ah.
Xaaladda noocaas ah, shaqo ka joojinta waa inay ku jirtaa bilow iyo dhammaad taariikhda.
Shaqo ka joojinta ayaa u oggolaaneysa in si deg deg ah looga joojiyo qandaraaska shaqada illaa inta laga qaadayo cunaqabateynta ugu dambeysa, oo nidaamkeedu u baahan yahay waqti go'an.
Shaqo ka eryida Conservatory oo ay ku xigto shaqo ka joojinta edbinta
Shaqo-ka-cayrinta shaqaaluhu waxay sababi kartaa:
qaadashada cunaqabateyn fudud kadib sharraxaad lagu qanci karo ee shaqaaluhu ku leeyahay dhaqankiisa khaldan (digniin, iwm.) ama xitaa xayiraad la'aan; u beddelid shaqo ka fadhiisin edbin ah (daruuri maahan mid u dhiganta); markii la qaadayo cunaqabateyn culus: kala wareejin edbin ah, hoos u dhigid, xitaa xil ka qaadis.
haa, waxaad u rogi kartaa shaqo ka joojinta shaqa joojinta shaqa ka joojinta shaqada.
Waad go aansan kartaa inaad ku dhawaaqdo shaqo ka fadhiisin edbin ah oo ah ciqaab inta shaqaalaha la dhigayo
Miyaan xaq u leeyahay inaan u beddelo shaqo ka fadhiisinta muhaajiriinta oo loo beddelo shaqo ka fadhiisin edbin ah? July 8th, 2021Tranquillus
READ Kusamee ganacsigaaga internetka Systèmeio
horeCaqabada Emilie: inay ku laabato jacaylkeedii ugu horeeyay 8 bilood ilaa maalinta
socdaCiidaha la bixiyo: waa waqtigii laga bixin lahaa!
Mashiinka Ganacsiga ee Ganacsi ee Bilowga
Kobcinta shaqsiyeed: kobcinta mahadnaqa afafka qalaad
Buugagta Zoho Buugga Maaraynta Maaliyadeed ee Ganacsiga